Wine njem nleta na Spain | Akụkọ Njem
Isabel Catalan | | omenala, Gastronomy
Ukọ nke osisi vaịn aghọọla nkà na Spain. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụ otu n'ime ndị na-emepụta mmanya kachasị ukwuu n'ụwa, nwere ihe karịrị hekta 900.000 nke ubi vaịn na ụdị mkpụrụ vaịn dị iche iche.
Ndị ọcha, rosés, red, fines, cavas, spark ... ha niile jikọtara n'ụzọ zuru oke na efere ụfọdụ na otu n'ime ihe ga-eme gị obi ụtọ na Spen kachasị bụ gastronomy ya na, n'ezie, mmanya ya.
Wineme njem nlegharị anya na Spain bụ ahụmịhe ga-eme ka ị mara ebe mmanya mara mma ma ọ bụ nke gara aga, nata klaasị n'aka ndị ọkachamara sommeliers, ihi ụra n'etiti ubi vaịnNa-esote, anyị na-enye gị ọtụtụ echiche ịnụ ụtọ ụwa a n'etiti ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ gị.
1 Omenala mmanya
2 Wzọ mmanya na Spain
Mmanya bụ akụkụ bụ isi nke ọdịbendị nke Spain, dị ka mba Mediterenian ọ bụ. N'ime ala ya dum, enwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie nke ga - egosi gị emume nke ịkwadebe mmanya na ịkọwapụta ya: si na Museum of Wine Cultures of Catalonia (VINSEUM), na Casa del Vino “La Baranda” na Tacoronte ma ọ bụ Thematic Center “Villa Lucía” dị na Álava ịkpọ aha ole na ole.
Wzọ mmanya na Spain
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmara ọdịbendị mmanya nke mpaghara ọ bụla, ị ga-ahụ ụzọ ndị a ga - eduzi ya site na mpaghara akụkọ ihe mere eme ya na ọtụtụ ubi vaịn ya na ebe a na - a winụ mmanya. Na Spain enwere ọtụtụ ụzọ mmanya na-eme njem njem nke oke ọdịbendị na akụ na ụba na ha niile nwere mmemme, ọdịdị ala na ememme ndị a ma ama nke ga-eme ka njem gị bụrụ ahụmịhe pụrụ iche.
Njem a nwere ike bido na Galicia, n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ obodo ahụ. Rzọ Rías Baixas bụ okporo ụzọ mmanya mmanya Albariño: broth ọhụrụ dị mma iji jikọta ya na azụ na azụ. Were ohere ịchọpụta akụkụ osimiri ya, nwere oke osimiri dị egwu zuru oke maka ịme egwuregwu mmiri.
Nakwa na mgbago ugwu Spain, ị gaan ịga ọwụwa anyanwụ ntakịrị bụ okporo ụzọ Rioja Alavesa. N'ebe a, a na-eme ka ụfọdụ n'ime mmanya Spanish mara mma n'ụwa niile. Na mgbakwunye, na ebe a ị nwere ike ịhụ ụlọ na-aga n'ihu na ebe a na-a winụ mmanya na-atụle katidral mmanya, nke bụ ọrụ nke ndị na-ewu ewu dịka Santiago Calatrava ma ọ bụ Frank O. Gehry, n'etiti ndị ọzọ.
Naanị kilomita 100 site n'ebe ahụ ka ụzọ mmanya ọzọ dị, nke Navarra. Obodo ndị dịka Olite ma ọ bụ Tafalla bụ ndị ama ama maka mmanya rosé ha. Routezọ a na-echeta ịdị mkpa nke ala a n'oge Camino de Santiago, nke UNESCO kwupụtara dị ka Ihe Nketa Worldwa.
Njem a na-aga n'ihu site na Aragon, n'okporo ụzọ Wont Somontano kpọmkwem ebe a na-eme mmanya ndị na-atọ ụtọ. N'ógbè Huesca, na mgbakwunye na ubi vaịn, anyị nwere ike ijuanya na nnukwu ogige nke Barbastro ma ọ bụ Alquézar yana Sierra y los Cañones de Guara Natural Park, ebe pụrụ iche na Europe.
Nkwụsị ọzọ na-aga n'okporo ụzọ mmanya bụ Catalonia, nke na-akpọ gị òkù ịchọpụta Wine Pineès na Cava. Saysị Catalonia bụ ịsị cava, ihe ọ drinkụ drinkụ na-enweghị atụ. A na-atụ aro ya ka ị gaa njem nlegharị anya nke ụlọ na wineries iji chọpụta ọmarịcha ọdịnala ọdịnala nke mpaghara ahụ, yana ọtụtụ ihe atụ nke nka Romanesque na Modernist.
N’akụkụ ndịda ọzọ anyị ga-ahụ Jzọ Mmanya Jumilla dị na Murcia, nke e ji mara mmanya ya na-emeri n’afọ ndị na-adịbeghị anya. Okwesiri ileta obodo ochie na ihe okike ya, ya na Sierra del Carche Regional Park.
Inezọ Wine nke Montilla-Moriles abanye na mpaghara Córdoba. Na njem a ị ga-enwe ohere ịnweta tapas, ụlọ oriri na ọ gastụ gastụ gastronomic nke gbanyere mkpọrọgwụ na mpaghara ahụ. Gaghị apụ na-agaghị eleta nnukwu ụlọ ya na nnukwu ụlọ alakụba Katidral, nke UNESCO kwuru na World Heritage Site.
Lazọ Mmanya La Mancha bụ njedebe nke njem a na-adọrọ mmasị. You maara na n'ihi ọnụ ọgụgụ hektari nke ubi vaịn a zụlitere, Castilla-La Mancha bụ mpaghara kachasị na-eto mmanya na ụwa? Okporo ụzọ ecotourism kachasị na Europe dị na mpaghara a: thezọ Don Quixote. Mee nkwụsị n'ụzọ nụrụ ụtọ gastronomy nke La Mancha wee banye na Tablas de Daimiel National Park ma ọ bụ Lagunas de Ruidera iji chọpụta ọdịdị La Mancha na ịma mma ya niile.
Nke a bụ otú Wzọ Mmanya Wine si bụrụ, ụzọ mbụ iji chọpụta gastronomic akụ na ụba nke Spain. Aromas, flavors, akụkọ ihe mere eme na nkà jikọrọ na ahụmịhe a. You ga-atụ uche ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Wine njem nlegharị anya na Spain